ग्रीस - ALinks
ग्रीस मा लेख
ग्रीस भिसा मुक्त देशहरु
सेप्टेम्बर 15, 2021 मैत्री झा ग्रीस, यात्रा, भिसा
ग्रीसका नागरिकहरुलाई ११४ देशहरुको भ्रमण गर्न भिसाको आवश्यकता पर्दैन। ग्रीक पासपोर्ट धारकहरु 114 ई-भिसा वा आगमन मा 35 भिसा प्राप्त गर्न सक्छन्। ग्रीसको जनसंख्या १०..15 मिलियन छ, जसको राजधानी एथेन्स छ। को लागी भिसा मुक्त यात्रा
ग्रीस भिसा कसरी पाउने?
नोभेम्बर 29, 2020 शुभम शर्मा ग्रीस, भिसा
तपाईंको ग्रीसको यात्रामा निर्भर गर्दै, धेरै प्रकारका भिसाहरू अवसरमा लागू हुनेछन्। यदि तपाईं भ्रमण, अध्ययन, वा काममा जान चाहानुहुन्छ र त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले बिभिन्न ग्रीस शेन्जेनको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
ग्रीसमा शरणका लागि कसरी आवेदन दिने?
5 सक्छ, 2020 एन्टिका कुमारी ग्रीस, शरणार्थीहरू
विदेशीहरू र राज्यविहीन व्यक्तिहरूले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खोजेको अधिकारीहरूलाई बताएर ग्रीसमा शरणको लागि आवेदन दिन सक्छन्। एक शरण आवेदन पेश गरेपछि, शरण खोजीकर्ताले पहिले एक आवेदन फाराम प्राप्त गर्दछ। त्यसो भए पछि उनको राहदानीको प्रतिलिपि
ग्रीस लिंकहरू, सूचना वेबसाइटहरू, च्याट समूहहरू
सेप्टेम्बर 11, 2019 Demi ग्रीस, शरणार्थीहरू, उपयोगी लिंकहरू
कागजातले ग्रीस जानकारीको बारेमा समावेश गर्दछ, अर्थात् लि links्कहरू वा आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरूको बारेमा विस्तृत कागजातहरू। यसले शरण, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य जस्ता धेरै पक्षहरूमा सबै देशलाई समेट्छ। मोबाइल जानकारी टीम / एथेन्स स्वयंसेवक जानकारी- ASYLUM सेवाहरू संख्या